मन्त्री योगेश भट्टराईमाथि ज्ञानेन्द्र शाहीद्धारा दु'ब्र्यवहार ! - Sidha News
मन्त्री योगेश भट्टराईमाथि ज्ञानेन्द्र शाहीद्धारा दु’ब्र्यवहार !
काठमाडौ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यान मन्त्री योगेश भट्टराई शनिवार कैलालिको टीकापुरमा डल्फीन महोत्सवको उद्घाटन गर्न पुगेका थिए । उनी नेपालगन्ज स्थित राँझा विमानस्थल प्रयोग गर्दै काठमाडौं फर्कदै थिए । मन्त्री फर्कदा निर्धारित समय भन्दा केही ढिलो भयो । मन्त्री सहितको टोली विमानस्थलमा आइपुग्न करिब एक घण्टा ढिलो भएपछि उनलाई लिएर फर्कन जहाज समेत एक घण्टा ढिलो भयो ।
सोही जहाजमा आफुलाई भ्रष्टाचार विरोधी भनेर दावी गर्ने ज्ञानेन्द्र शाही लगायत उनका कार्यकर्ता पनि फर्कदै थिए । मन्त्रीको उडानमा ढिलाई भएका कारण आफुहरुले विमानस्थलमा एक घण्टा पर्खनु परेपछि ज्ञानेन्द्र शाही लगायतका उनका कार्यकर्ता मन्त्री भट्टराई माथि जाइलागे । उनीहरुले बुद्ध एयरको विमान एक घण्टा ढिलाई भएको भन्दै मन्त्री विमानस्थल नआइपुग्दै आन्दोलन गर्दै बसेका थिए । निकै आ क्रामक देखिएका शाही अभद्र शब्द प्रयोग गर्दै वुद्ध एयरका कर्मचारीलाई पनि तिमीहरु मन्त्री भट्टराईको चम्चा हौ ? भन्दै बोलेका थिए । शाहीका कार्यकर्ताहरुले विमानस्थलमा जहाजका कर्मचारीसंग सवाल जवाफ गरिरहँदा मन्त्री आइपुगेपछि उनीहरु मन्त्री भट्टराई माथि पनि जाइ लागेका थिए ।
मन्त्री भट्टराईलाई औला देखाउँदै शाहीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि सरकारका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई नछोड्ने चे तावनी दिए । उनले मन्त्री भट्टराईलाई कुन मोजमस्तीमा हुनुहुन्थ्यो भनेर अभद्र शब्द प्रयोग गरेका थिए । तपाईको पदलाई सम्मान गरेपनि यो तरिका भएन भन्दै निकै चर्को श्वरमा कराएका थिए । आफु ठूलो श्वरमा बोल्दै गर्दा शाहीले भने संस्कृति मन्त्रीसंग संस्कार नभएको टिप्पणी गरेका थिए ।
कैलाली होटल व्यवसायी संघद्धारा आयोजित डल्फीन महोत्सवको उद्घाटन गर्दै मन्त्री भट्टराईले सरकारले टीकापुर विमानस्थल सञ्चालन गर्ने बताएका थिए । मन्त्री भट्टराईले सरकारले तत्काल टीकापुर ऐयर पोर्टको संचालन अध्यायन गर्न एक अध्यायन टोली पठाउने र सोही टोलीको प्रतिवेदनका अधारमा टीकापुर ऐयरपोर्ट सञ्चालन गरिने बताए ।
महोत्सवको उद्घाटन गर्दै मन्त्री भट्टराईले कैलाली , बर्दिया र सुर्खेतका पर्यटकिय स्थलहरु समेट्दै पर्यटनको एकिकृत सञ्जाल निर्माण गर्न नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने कामको विस्तृत परियोजना बनाएर स्थानिय तथा प्रदेश सरकारले पेश गरेमा सरकारले उक्त परियोजनाका लागि बजेट छुट्टयाउने विश्वास दिलाए । आजै मन्त्री भट्टराईले सिमसार तथा पर्यटकिय क्षेत्र घोडाघोडि तालको समेत अवलोकन गरेका थिए ।